Madaxweynaha Turkiga oo Si Weyn Loogu Soo Dhoweeyey Doxa – Radio Daljir
Madaxweynaha Turkiga oo Si Weyn Loogu Soo Dhoweeyey Doxa
Luulyo 25, 2017 7:41 b 0
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan oo sodaal xal raadin ah ku maraya Wadamada Khaliijka Carabta ayaa gaaray magaalada Doha ee caasimada dalka Qadar, waxaana dalkaasi loogu soo dhaweeyay si heer sare ah.
Erdogan oo horey booqasho ugu tagay Wadamada Sacuudiga iyo Kuwait ayaa lasoo kulmay madaxda wadamadaasi, waxa uuna kala hadlay Madaxweynaha sidii loo qaboojin lahaa xiisada ka taagan Khaliijka gaar ahaan tan u dhaxeyda Xulufada Sacuudiga iyo Qadar.
Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa markii uu gaaray magaalada Doha waxa uu kulan gaar ah la qaatay Amiirka Qadar, Tamim bin Hamad Al Thani, waxa ayna labada masuiul kawada hadleyn xiisada khaliijka iyo sida ugu macquulsan ee loo xalin karo xiisada wali taagan.
Dowlada Turkiga ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo qaboojin lahaa xalna looga gaari lahaa xiisada ka aloosan wadamada Khaliijka, waxaana Madaxweyne Erdogan ujeedkiisu yahay in uu dhax dhaxaadiyo wadamada xiisada u dhaxeyso.
Turkiga ayaa xiriir ganacsi oo aad u weyn la leh Wadamada Khaliijka gaar ahaan wadamada hada xiisada u dhaxeyso , waxaa sidoo kale Turkiga saldhig Milatari ku leeyahay dalka Qadar oo hada Wadamo carbeed kusoo rogeen xayiraada.
Shirkii Isgaarsiinta ee Kismaayo Ka Socdey oo Fashilmay (BAYAAN)